Qormaanni yemmuu jajjabaatu "Hasbunallahu wa ni'mal wakiil." Jedhaa - NuuralHudaa
Qormaanni yemmuu jajjabaatu “Hasbunallahu wa ni’mal wakiil.” Jedhaa
“Hasbunallahu wani’mal wakiil (Rabbiin nuuf gahaadha. Inni Tiiksaa akkam tole!)” (Suuratu Aal-Imraan 3:173)
Ibn Abbaas (radiyallahu anhu) aayah tana,
ilaalchisee akkana jedha: Jecha tana yommuu Nabii Ibraahim (aleeyh assalaam) ibiddatti darbamuu jedhee jira. Nabii Muhammadis (ﷺ) yommuu namoonni, “Dhugumatti, namoonni isiniif walitti qabaman. Kanaafu isaan sodaadhaa.” isaaniin jedhan jedhee jira. Ayaatni kun iimaana isaaniif (Nabiyyii fi sahaabotaaf) dabale, ni jedhaniis: “Hasbunallahu wani’mal wakiil. (Rabbiin nuuf gahaadha. Inni Tiiksaa akkam tole!)”
Wanti asirraa barannu guddaan namni yeroo qormaata jajjabdu, gara Rabbii dheessu, Isarratti hirkachuu fi abdachuu qaba. Yoo inni akkana godhe, iimaanni isaa ni dabalamaaf. San booda, warra milkaa’an keessaa ta’a. Faallaa kanaa, waa’ee Rabbal aalamiina yaada badaa yaaduu, yoo isarraa garagalee, qormaanni itti cima; kufaatiif of saaxila.
Yeroo rakkoo obsa, abdii fi istighfaara (araarama kadhachuu) baay’isuu barbaachisa. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa ni jedha:
(فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقࣱّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ بِٱلۡعَشِیِّ وَٱلۡإِبۡكَـٰرِ)
“Obsi! Dhugumatti waadaan Rabbii haqa. Zanbii keetiif araarama kadhu. Ganamaa galgala faaruu Gooftaa keetiitiin Isa qulqulleessi.”
[Surat Ghafir 40:55]
Fakkeenyaaf, Astaghfirullah wa’atuubu ileyh (Rabbiin araarama kadhadha, gara isaatti deebi’a)” jechuu baay’isuu. Akkasumas, “Subhaanallahi wabihamdihi (Rabbiin faaruu isaa waliin qulqullaa’e)” jechuu baay’isuu qabna.
September 22, 2021 sa;aa 4:52 am Update tahe